OROMOON MAALIIF WALII HINGALUU?-Dr. Solomon Ungushe’- – Beekan Guluma Erena
OROMOON MAALIIF WALII HINGALUU?-Dr. Solomon Ungushe’-	Beekan Erena
AFOOLA/OROMO FOLKLORE, Asoosama, Audio/Video/Image Category January 5, 2017January 5, 2017#OROMOREVOLUION
OROMOON MAALIIF WALII HINGALUU?-Dr. Solomon Ungushe’
“Oromoon biyya alaa jiraatan maaliif walii hin galani? Maaliif wal nyaatu, maaliif walirratti duulu?”
Gaaffiileen kana fakkaatan nama addaddaa irraa natti ergamu. Gaaffii gaariidha, Deebisuun yaala.
Waliigalteen haalduree barbaachisoo (necessaryy conditions) afur gaafata: 1) Fedha, 2) ilaaf ilaamee, 3) iftoomina, 4) ofittummaa dhabuu (selflessness). Arfan kun guutamanii hin argamne taanaan hangam hawwamuyyuu waliigaltee uumuun hin danda’amu. Waliigaltee uumuuf fedha qabaattee, ilaaf ilaametti hin amantu taanaan, jiruun hojjettu fi dubbiin dubbattu iftoomina hin qabu taanaan, fedhi kee sun bu’aa dhuunfaa akka siif argamsiisu barbaadda taanaan waliigaltee uumuuf hangam carraaqxuyyuu milkoomuu hin dandeessu. Oromoon biyya aaa jiraatu kan waliigaluu dadhabuuf haalduree barbaachisoo afuran guuttatee waan hin qabaanneefi.
Ilaalcha koo kana ifa gochuuf jiruu dhiyeenya hojjetame tokkon kaasa. Innis Konvenshanii Atlantaati. Yaada Konvenshanii sana qopheessuu irratti nama hedduutu irratti mariyaataa ture.
Mareen taasifamaa otuu jiruu dhimmoota tokko tokko irratti yaadi addaddaa dhiyaate. Yaada ka’an sana irratti ilaaf ilaamee dhaan mariyatanii walii galtee uumuun ni danda’ama ture.
Garuu gareen yaada isa tokko deggeru ilaaf ilaamee dhaan maree itti fufuu hin barbaadne. Jaallattan keessatti qooda fudhadhaa jibbitan dhiisaa, nuti akka feenetti konvenshanii sana qopheesinee geggeesinaa jedhee jiruu isaa jalqabe. Gareen inni kaan lakkii ilaaf ilaamee dhaan mariyatnee walii galtee uumuu wayyaa jedhus, gareen inni duraa fudhachuu hin barbaadne. Konvenshaniin Atlanta sun nama bakka lamatti qoode jechuudha. Jiruun Atlantaatti hojjetames waldhabiinsa babal’ise. Gareen lamaanuu jalqabatti walii galtee uumuuf fedha qabu turani. Kanaafi kan waliin hojjechuu jalqabani. Garuu ilaaf ilaamee dhaan hojjechuu dadhabani. Kanaaf dhimmicha irratti waliigaltee uumuun dadhabame. Rakkinni Oromoo biyya alaa kana fakkaatee natti muldhata. Haalduree barbaachisoo ta’an sana hanga guuttatutti Oromoon biyya alaa waliigaltee uummachuu hin danda’u.
← Dhinsa Yonas (Dr.,DM)-Ogeessa Fayyaa, Asoosaa, waloofi Qaroo Dhaloota Qubee. Kitaaba Afaan oromoo Lama walfaana dubbistootaaf Dhiyeesse!
Personal Ambition the source of our weakness, part 1 and 2 By Rundassa Asheetee Hundee →